Matoky ao amin'ny Smile sy White Teeth | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Maro ny olona no te ho fotsy ny nifiny. Misy isan-karazany ny zavatra azonao atao mba hahazoana antoka ny nify dia tsy havelako mavo. Misy fomba mahafotsy ny nify fotsy indray. Ity lahatsoratra ity dia ahitana toro-hevitra isan-karazany noho ny mahazo anareo nify fotsy sy hiaro azy fotsy.
Ataovy azo antoka ny nify no antsakany sy andavany nanadio alohan'ny fampiasana an-trano Whitening ny nify regimen. Teeth Whitening vokatra ho mahomby kokoa raha mampihatra azy ireo eo amin'ny tena madio teeth.If Ny nifinao dia tsy madio rehefa mahafotsy alohan'ny fanilihana dia ny vokatra ho uneven shading.
Ny rehetra dia mahafantatra fa Citrus voankazo, toy ny voasary na voasarimakirana, dia manan-karena amin'ny vitaminina C, Fantatrao ve anefa izy ireo dia afaka hahatonga anao nify fotsy? Azonao atao mihitsy aza mampiasa voasarimakirana Peel na voasary, rehetra tsy maintsy atao dia hifindra ho etỳ ambonin'ny ny nify hanohitra ny indray ampahany, izay mahatonga azy ireo ho miparitaka. Amin'ny alalan'ny fametrahana kely ny sira teo amin'ny Peel ny voasary makirana na voasary, ny vokatra azo kokoa.
Ny zava-dehibe voalohany, rehefa miezaka ny hitandrina ny nify fotsy no matihanina cleanings. Get ny nify nanadio isaky ny enim-bolana, ary mandamina ny ho avy mandrakariva fanendrena rehefa any ny amin'izao fotoana izao ny fanadiovana.
Ireo vokatra dia ahitana zavatra simika izay hampietreny ny nify. Ny borosy ny fahombiazana no mahatonga antoka Ny nifinao dia madio.
Raha misotro soda, dite, kafe na maizina divay, sip rano ihany koa. Ireo zava-pisotro mainty no voalotoko ny nify, indrindra fa raha ho levona tapaka. Swishing sips ny rano manodidina eo am-bavanao eo sips ny zava-pisotro ireo dia afaka manampy manafoana izay sisa izay mety hiteraka staining. Rehefa avy mandevona ireo zava-pisotro, aza adino ny miborosy nify raha vao araka izay azo atao.
Ny kely fantatra fomba hahazoana ny nify ny whitest dia ny mampiasa ny voankazo sasany. Roa ohatra ny voankazo faran'izay tsara izay afaka mahafotsy nify dia voasary sy ny voasary. Azonao atao ihany koa ny hamafàny ny volomboasary Peel manohitra ny ambonin'ny ny nify mba mahafotsy azy ireo.
Mitondra ny borosy nify kely izay azonao ampiasaina rehefa avy nihinana siramamy. Ireo sakafo mifikitra ny nify mora foana, ary manomboka ny dingana staining na hanampy azy io. Rehefa mitondra ny tenanao ho amin'ny mamy, maka fotoana kely mba miborosy. Toothpaste dia tsy ilaina raha kirihitra ny nify, ary avy eo dia hosasany azy tsara.
Ny satro-boninahitra dia tsy mahafotsy toy ny sisa ny nify. Ny satroboninahitra dia hitoetra toy ny nify mahazo fotsy. Mety hahatonga ny satro-boninahitra mitsangana avy mihoatra noho eo anatrehan'i.
Mila mba hisorohana ny takelaka buildup satria mety hahatonga ny nify ho discolored.
Foana ny borosy nify stowed eny izy noho rehefa mihinana vatomamy na zava-mamy hafa. Satria sakafo ireo mifikitra amin'ny nify tena mora foana, afaka hampiroborobo ny staining. Rehefa avy mankafy ny zava-mamy, miborosy ny roa na telo minitra. Tsy voatery ho manana toothpaste, raha mbola ianao kirihitra tsara ny nify ka hosasany amin'ny rano malalaka.
Organic menaka voaniho dia azo ampiasaina ho toy ny mpandraharaha Whitening lehibe noho ny teeth.If mampiasa menaka voaniho ho toy ny miborosy nify, dia mety mahafotsy ny nify in ny 10 minitra isan'andro. taorian'ny about 10 minitra, hosasany ny vavanao ka borosy rehefa ara-dalàna te. Afaka hahita vokatra Tsy ampy andro vitsivitsy.
Miborosy nify taorian'ny sakafo rehetra dia hanampy mba hiaro azy ireo ho afaka amin'ny discoloring. Izany no ilaina, rehefa misotro kafe ianao.
An organique menaka voaniho dia mety ho marina ny tapakila mba Whitening ny nify. Manome ny nifinao ny 10 minitra isan'andro hosasany amin'ny voaniho menaka dia afaka manana fiantraikany lehibe eo amin'ny hafotsiany ny ny tsikinao. taorian'ny 10 minitra izay no lasa, hosasany ny vavanao, ary manadio ny nify toy ny ara-dalàna. Tokony hahita vokatra rehefa afaka andro vitsivitsy.
Ny mpitsabo nify dia afaka milaza aminareo izay tsara indrindra an-trano nefa tsy manimba nify karazana verinia na ramy.
Miborosy nify tsy tapaka raha manana tsiky lehibe. Sakafo sy ny zavatra hafa dia afaka manorina eo amin'ny nify sy hampietreny azy. Tsy maintsy ho tezitra momba ny nify discoloration raha tapaka miborosy nify.
Rano no fitaovana manan-danja eo amin'ny ady atao stains. Manampy anao ho roa hosasany ny nify eny ary koa ny fisorohana ny staining. Tena salama tsara foana ny fomba fanao ny fanjifàna rano ny isan'andro, indrindra taorian'ny sakafo tsirairay.
Mba hihazonana ny hafotsiany ny nify, mandeha any amin'ny mpitsabo nify tsy tapaka ho madio sy ny maso ny dia tsy maintsy. Ny fananana tsy tapaka no fomba lehibe iray mba hitandrina ny nify fotsy. Tokony hitsidika ny mpitsabo nify, fara fahakeliny, isaky ny enim-bolana.
Mampiasa Whitening toothpaste no fomba tsotra indrindra hahazoana ireo voaravaka perla fotsy nify fa efa nitady. Amin'ny alalan'ny friction, toothpaste ity rids ny stains sy ny takela-pahatsiarovana. Rehefa ela, dia manana nify mamirapiratra toy ny stains manomboka hanjavona.
Hidrôzenina peroxyde tsy tokony ho azo antoka ho an'ny Whitening fitsaboana nify. Tena mampidi-doza ary mety hahatonga ny nify discolored; dia mety koa hiafara amin'ny nify miloko roa samy hafa. Ialao izay vokatra izay manana hydrogène peroxyde.
Karazana verinia dia sosona ny mineraly eo amin'ny fiarovana mineraly sosona izay manampy hisorohana ny fototeny aretina ary koa ny zavatra hafa izay mety hanimba ny nify. Misy nify Whitening vokatra mety hisy fiantraikany ratsy ny hafotsiany ny nify.
Raha miborosy nify sy floss indroa isan'andro, dia mety manana nify fotsy raha oharina amin'ireo izay tsy manao izany matetika. Mampiasa fomba ireo dia hanala ny buildup ny takela-pahatsiarovana, izay discolors ny nify. Tena hevitra tsara ny miborosy nify ary koa floss isaky ny sakafo.
Dia tsy maintsy hampihena ny kafe mba hahazo ny fotsy smile.As mafy toy izany dia mety ho maro ny olona, kafe no mpitarika mahatonga ny discolored ary voaloto nify. Miezaha hisotro sokola mafana fa tsy ny kafe.
Ny Citrus amin'ny voasarimakirana sy ny ranom sokay afaka mahafotsy ny nify amim-pahombiazana dia antitra vadiny tantara. Izany dia hevitra tsara ny hijanona tanteraka ny hiala amin'izany fomba fitsaboana.
Tokony ho fantatrao fa misy ny vahaolana Whitening voajanahary ihany no miasa amin'ny nify. Any solon-faritra, anisan'izany ny satroboninahitra, firaiketam-po, maniry sy ny toy izany dia tsy hovana ny lokony. Mampiasa nify whiteners mety hiteraka asa nify, toy ny satro-boninahitra, mba hijoro hanohitra ny voajanahary avy fotsy nify.
Hanana salama sy fotsy nify amin'ny fototra fanadiovana fahazarana tsy tapaka amin'ny toothpaste sy flossing. Products misy fanaova soda dia mahomby amin'ny fanesorana stains rehefa floss sy flossing.
Citrus voankazo afaka asidra be loatra ho an'ny teeth.You dia tokony ihany koa ny tsy Citrus juices ihany koa. Ny amine ao Mahatsiravina noho ny nify. Ianao ihany koa ny te mba tsy mihinana ireo sakafo eo anoloanareo nodimandry any amin'ny alina, satria anao kokoa fa hiharan'ny asidra reflux, izay afaka manimba ny nify ihany koa.
Raha liana amin'ny Whitening ny nify, miresaka amin'ny mpitsabo nify voalohany. Whitening anao nifiny dia tsy tsotra tarehy fikasana. Mandehana any amin'ny mpitsabo nify tsy tapaka mba hahazoana antoka ny nify salama. Ataovy azo antoka mba hiresaka ny mpitsabo nify momba ny nify Whitening regimen.
Manaova vovoka amin'ny alalan'ny miara-mitoto vary volomboasary peels sy ny helo-drano ravina. Zavatra vovoka Azo ampiharina amin'ny borosy nify sy ny fahatsapana.
Aza mahafotsy ny nify raha tsy voavaha olana nify toy ny cavities.Make azo antoka ny hevitra amin'ny mpitsabo nify talohan'ny manomboka misy an-trano dia mety Whitening fomba ho anao.
Aza matoky toothpastes izao izay milaza fa hanome anao Ho fotsy nify. Maro ihany no kely mahafotsy ny nify, raha mihitsy, nefa afaka mampiasa vokatra hafa raha tianao fotsy nify. Raha manao mividy Whitening toothpaste, mividy izay mofo misy soda, araka izay marina dia afaka manampy.
Araka ny voalaza eo anatrehan'i, misy olona maro samy hafa izay te-hanana fotsy nify. Maro ny paikady hafa azo ampiasaina noho ny Whitening ny nify sy ny fanesorana mavo stains. Ny nifiny dia mety ho fotsy araka izay azo atao raha toa ianao mampiasa fotsiny ny fanazavana aseho eto.
Sokajy: Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify Tags: Bright White Smile, Matoky ny tsikinao, Smile, fotsy nify